﻿ टुक्रियो सपना
- गजेन्द्र मोक्तान
सोमबार ०९, मङि्सर २०७६
तिमी झापाबाट कहिले आयौ नि ?
‘म भर्खर एक बजे आइपुगेँ । भद्रपुरमा फ्लाईट रोकियो त्यसैले ढिला भयो । तिम्रो खबर के छ ?’
मतिर फर्केर मुस्कुराउँदै उनले सोधिन् ।
‘म त तिम्रो अभावमा पानीबिनाको माछो झैं छट्पटिएको छु ।’ – मैले जवाफ दिएँ ।
‘ए हो र तिमीलाई गफ लाउन खुब आउँछ नि है ?’ मेरो कुममा आफ्ना नरम हातले प्याट्ट हिर्काइन् ।
‘ए साँच्ची तिम्रो पढाई कस्तो हुँदैछ गज्जु ?’
मैले भने, ‘ठिकै छ ट्युसन पढ्दैछु बागबजारमा सुवास गिरीसँग । तिमीले पढिसक्यौ र ढुक्क छौ ।’ मैले जिस्कँदै भनेँ । उनले मेरा लागि इलामबाट ल्याएको पोलिथिन भरीको छुर्पी र लालीपप मतिर बढाउँदै भनिन्, ‘ल ल खाऊ ।’
‘मेरो भोली जन्मदिन छ मलाई के दिने ?’ उनी पनि के कम उस्तै जिस्कने स्वभाव थियो ।
‘मैले के दिनु र तिमीलाई चोखो माया बाहेक ? जागिर छैन व्यापार छैन । बरु तिम्रो केक खान आउँला नि है हुन्छ ?’ हाम्रो कफी शपमा निकै गफ भयो । कुराकानीको अन्तमा जन्मदिन मनाउनको लागि आफ्नै घरमा बोलाईन ।
उनका बुवा नेपाल प्रहरीको वरिष्ठ प्रहरी उपरिक्षक (एस.एस.पि) भने आमा सामान्य मन्त्रालयको अधिकृत हुनुहुन्थ्यो । उनले हात्तीवनको लिटल एन्जल्सबाट एस.एल.सी पास गरेकी थिईन भने काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट बि.बि.ए गरेकी थिइन् । सभ्य र सम्पन्न परिवारकी भए पनि मोनिकामा कहिल्यै अहमता देखिनँ मैले । म जस्तो गाँउलेलाई पनि किन र कसरी मन पराइन म चकित हुन्थेँ ।
एकपालीको दशैंमा घर जाँदा चिनजान भएकी उनीसँग गहिरो पिरतीमा परेँछु म त । मलाई उनले सोझो र भलादमी लाग्यो रे त्यसैले मनदेखि नै तिमीलाई मन पराएँ तर तिमी र मसँगै हुनको लागि वैज्ञानिक ढंगले मात्र हुन सँगै हुन सक्छौ नत्र परिवारकी कान्छी छोरी अस्ति मात्र नेपाली सेनाका सेनानी थापा थरको एक जना माग्न आएको थियो तर मैले मानिनँ । यसरी कुरा हुन्थ्यो हाम्रो, उनलाई मैले कोठा भाडा तिर्नलाई ठिक्क पारेको पैसाले न्युरोडमा गएर ईटालियन ब्रान्डको जुत्ता उपहार ल्याई दिएँ किनभने राम्रो ब्रान्डको जुत्ता र कपडा लाउन सौखिन थिइन् गोरी र सर्लक्क मिलेको शरीर टक्क कपडा लाएसी जेनिफर लोपेज जस्तै मान्थे मैले ।
दुःख–सुख बुझ्ने मान्छे सायद उनी मात्र थिइन् मेरो जीवनमा त्यसैले उनलाई एउटा उपहार दिन कुनै कन्ज्युस्याँई थिएन । उनको जन्मदिनमा गएँ उपहार दिएँ केक खाएँ उनी धेरै खुशी भइन् मेरो उपस्थितिले ।
‘तिमीले कोठा भाडा तिर्नु पर्छ, खानु पर्यो, ट्युसन फि र साथीभाईसँग चिया खाजा खानु पर्यो मैले त जिस्किएको मात्र यति महंगो चिज किन ल्याएका नि ? उनले हकारिन् । मैले कुरा मिलाएँ दिनहरु बित्दै गए ।
हाम्रो विवाह त कठिन थियो । जात, स्तर फरक थियो त्यसैले हामीले विवाहका लागि बेग्लै आधार बनाउनु पर्थ्यो । उनी अष्ट्रेलियामा MBA गर्न हामी दुवैको सल्लाह अनुसार जाने निश्चित भयो त्यसपछी उनकै पहलमा जान सक्ने भएँ र विवाह गर्न सजिलो हुने भयो ।
सहमति बमोजिम मोनिका University of New South Wales मेलबर्नमा पढ्नलाई गइन् । हाम्रो प्रायः सधै कुरा हुन्थ्यो म पनि एक बर्षभित्रमा विवाह गरेर जानको लागि प्रक्रिया अगाडी बढाउँदै थिएँ ।
होलीको दिन साथीहरुसित खेल्दै रहँदा अचानक खबर आयो मोनिका मार्गरेट रिभर घुमेर आउँदा कार दुर्घट्नामा परेर मृत्यु भएको खबरले स्तब्ध भएँ ।
उनी दुर्घटनामा पर्दा म पनि उनीसँगै परेँ झै भयो मेरो जीवनको रहरहरु खुशीहरु उनीसँगै गयो । लेखान्तमा जीवन अडेको छ हामी त पात्र रहेछौ निर्देशन त भगवानले नै गर्दोरहेछ । टुक्रियो सपना मेरो त्यो दिनदेखि लाग्न थाल्यो खुशी त अब यो जुनीमा हुन्न होला मन परेको मान्छे, मैसामु नरहे पछि बाँचेर पो के गर्न सक्छु र ? उनको यादमा परे पछि यस्तै हुन्छ आजभोली मलाई । त्यसैले दिक्क लाग्छ होलीको दिन ।
फुटेको कॉच जस्तै भाग्य फुटेपछि
मेरो सारा खुशीहरु दैवले लुटेपछि
बॉंच्नु पनि के बॉंच्नु घायल मुटु लिएर
नमेटिने याद प्रिय गयौ मलाई दिएर !!
मातातीर्थ औँसीको अवसरमा गायिका अस्मिता पाण्डेको ‘मेरी आमा’ सार्वजनिक (भिडियो सहित)